Manchester City Oo Guul Ku Gaartay Etihad Xili Sadaxley Uu Dhaliyay Riyad Mahrez
HomeHoryaalka IngiriiskaManchester City oo guul ku gaartay Etihad Xili Sadaxley uu dhaliyay Riyad Mahrez
Manchester City ayaa jawaab kulul ka bixisay guuldaradii Tottenham iyagoo 5-0 ku xasuuqay kooxda Burnley oo marti ugu aheyd garoonka Etihad Stadium.
Riyad Mahrez ayaa dhaliyay seddexleeydiisii ugu horeysay ee Man City halka Kevin de Bruyne uu caawiye ka noqday labo gool iyadoo ay sidoo kale shabaqa soo taabteen Torres oo dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee Premier League iyo Mendy oo dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee Man City.
Natiijadaan ayaa ka dhigan in Man City ay soo gashay kaalinta 8aad iyagoo leh 15 dhibcood waxay lix dhibcood ka danbeeyaan kooxda hogaanka heysa ee Liverpool inkastoo kooxda Guardiola uu kulan u harsan yahay.
Kulankaan waxaa min bilow iyo dhamaad iska maamuleysay kooxda martida loo ahaa ee Manchester City iyadoo lix daqiiqo kaliya ay ku qaadatay inay Man City hogaanka u qabato ciyaarta markii Burnley ay kubada ku dhiibatay bartamaha garoonka taasoo keentay inay weerar degdeg ah qaadaan wiilashada Gaurdiola, De Bruyne ayaana baaskii ugu danbeeyay u dhigay Riyad Mahrez oo shabaqa ku hubsaday.
Mahrez ayaa dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta markii uu kubad foori gacan ah uu ka helay Kyle Walker isagoo ku guuleystay inuu koontaroolo islamarkaana uu shabaqa dhex dhigo.
Waa markii ugu horeysay tan iyo 2016 oo ay Manchester City kubad foori gacan ah gool ku dhaliso horyaalka Premier League. Intii aysan dhamaanin qeybta hore waxaa ciyaarta hurdo u diray Mendy kaasoo dhaliyay kubad caawin aheyd uu ka helay boqorka caawinta Kevin de Bruyne.
Waa goolkii ugu horeysay ee uu Mendy u dhaliyo Manchester City ka dib 60 kulan uu u saftay tartamada oo dhan.
Goolasha Man City oo ahaa kuwa iska socday oo aan kala joogsi laheyn ayaa halkooda ka sii socday daqiiqadii 66aad markii ay kubad si wadajir ah uga soo shaqeeyeen xiddigaha City iyadoo Jesus uu kubad u dhigay ugu danbeyn Torres kaasoo isna goolhayaha dabamariyay.
Seddex daqiiqo ka dib Riyad Mahrez ayaa dhameystirtay seddexleydiisa isagoo dhaliyay goolkii shanaad ee Manchester City. Foden oo bedelay Torres ayaa karoos uu soo dhigay waxaa madax ku dhaliyay xiddiga reer Algeria.
Seddexleyda uu dhaliyay ayaa ka dhigan in Mahrez uu gaaray 102 goolal iyo caawin horyaalka Premier League (61 gool iyo 41 caawin).
Riyad Mahrez waa xiddigii labaad ee Afrikaan ah ee seddexleey u dhaliya Man City horyaalka Premier League ka dib Yaya Toure oo ka dhaliyay Fulham bishii March 2014.
Waxay ciyaarta ku soo idlaatay 5-0 oo ay Man City ku xasuuqday Burnley.